Home EGO AFRICAN FOOTBALL Hakim Ziyech Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Anyị Hakim Ziyech Biography Eziokwu na-enye nkọwa zuru ezu banyere Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ndụ Ezinụlọ, Nwanyị / Nwunye, Ndụ Onwe na Ndụ. Ọ bụ nyocha zuru oke nke Ndụ Ndụ ya, bido na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ Onye ama ama.
Ndụ Hakim Ziyech.
Ee, ndị egwuregwu bọọlụ mara maka ikike ya ịnwe ọmarịcha mpempe akwụkwọ na dribble ọma. Ka osi di, otutu adighi anu ma obu guo Hakim Ziyech's Biography. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Akụkọ banyere ụmụ Hakim Ziyech:
Iji bido, Hakim Ziyech Amuru ya na abali iri n’abuo nke Machị 19 n’obodo Dronten na Netherlands. Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụ 1993 amụrụ nne ya Moroccan na nna nna Dutch ya.
Ziyech na-eto eto toro n’obodo ya na Dronten n’akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye, Faouzi Ziyech, nwanne nwanyị nwere aha Jam Ya na ụmụnne nwoke isii ndị ọzọ bụ ndị amachaghị banyere ọnwa Mee 6.
Hakim Ziyech toro na Dronten na Netherlands.
Hakim Ziyech na-etolite:
N'ịbụ ndị tolitere na Dronten, Ziyech na-eto eto bụ naanị nwata dị afọ ise mgbe ọ malitere ịgba bọl n'okporo ámá n'akụkụ ụmụnne ya ndị okenye bụ ndị ezigbo egwuregwu bọl n'okporo ámá n'oge ahụ.
Hakim Ziyech Ezinụlọ:
Brotherhụnanya nwanne ahụ nwere maka football nwere ike ọ gaghị abụ ihe jikọrọ ya na eziokwu ahụ bụ na ha sitere n'ezinụlọ dara ogbenye. Dị ka ndị dị otú a, ịgba bọl na ịga ụlọ akwụkwọ bụ ihe omume ndị na-ekwu maka ọdịnihu dị mma maka ha. Ndị nne na nna Ziyech enweghị nsogbu na ya na-egwu egwuregwu ebe ụmụnne ya nwanyị hụrụ na e lebara ya anya nke ọma.
Gaa na nne na nna Hakim Ziyech.
Hakim Ziyech Ndụ Akụkọ - Afọ Ndị Mbụ na Football:
Ka ọ na-erule oge Ziyech dị afọ 10, nna ya nwụnahụrụ nnukwu ọrịa (otutu sclerosis). Ọnwụ nke papa nwatakịrị bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ nke mere ka ndụ siere ya na ezinụlọ ya ike.
Mgbe Ziyech mechara merie ujo ahụ, ọ malitere ịkụ aka na football site na inye SC Heerenveen ọzụzụ. Site n'enye ọzụzụ ahụ, onye dị afọ iri na anọ ahụ nyeere obere aka iji kwado ego ezinụlọ ya.
Ihe egwuregwu bọọlụ bidoro inweta SC Heerenveen site na afọ 14.
Hakim Ziyech Biography- Ndụ Afọ Ndụ:
Ọrụ nwatakịrị ahụ na SC Heerenveen gbanwere mgbe ọ ghọrọ onye na-adịghị mma na ọzụzụ ma ọ bụ - n'oge ụfọdụ - enweghị nsọpụrụ nye ndị otu na ndị nkuzi ya. Ọganihu ahụ nwere ike ịkwụsị ịgba ọsọ football ya ma ọ bụrụ na Aziz Doufikar arịọghị arịrịọ maka ya.
Okwesiri ighota na Doufikar bu onye mbu na-egwu Moroccan n'akụkọ ihe mere eme nke Eredivisie. Mmekọrịta ya na Ziyech laghachiri ọbụna tupu nwata ahụ amalite ọzụzụ na SC Heerenveen. N'ezie, ọ bụ nna nna nke Ziyech ma kụziere ya otu esi esi egwu bọọlụ n'ime ụlọ. Akụkọ a na-ewere ọpụrụiche pụrụ iche mgbe ọ bụla ndị edemede dere akwụkwọ akụkọ Hakim Ziyech.
Doufikar (onye nke abụọ site n'aka ekpe) na-agwa ya okwu (guzo nke abụọ site n'aka nri) na ikike niile gụnyere bọl ime ụlọ.
Hakim Ziyech Bio - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ihi nkwado Doufikar na ezi ndụmọdụ, Ziyech nwetara ohere ọzọ na SC Heerenveen wee mee nke kachasị mma. Nbuli ya site na klọb klọb bụ meteoric, na-ejedebe na mmalite nke Eredivisie ya n'oge ọnwụ 2-0 megide NEC Nijmegen na August 2012.
Gbaso Ziyech's Eredivisie Debut, enweghị njedebe ịhụ ihe ọ ga-enweta na bọl ọkachamara. Stats kwuru banyere ọdịnihu dị mma maka ya, dọtara uche nke FC Twente nke mere ngwa ngwa ịbanye na Midfield na 2014.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke FC Twente na-akwado ọbịbịa ya na 2014.
Hakim Ziyech Bilie Iji Ma Ama Aha Akụkọ nke:
Nyefe ndị na-esochi ya hụrụ Ziyech ka ọ bụrụ onye na-egwu Ajax na 2016 mgbe ọ nwụsịrị ọrụ afọ 2 na-atọ ụtọ na Fc Twente. N'oge na-adịghị anya, Ziyech meriri obi ndị fans na Ajax maka ọrụ ngosi ya na Dutch football, Europa League yana Njikọ Njikọ.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere akwụkwọ a na akụkọ ndụ Hakim Ziyech, Chelsea FC chebere ọrụ ya ebe ọ na-atụ anya ịbụ otu n'ime okike n’egwuregwu bọọlụ dị ka Joao Moutinho, Christian Eriksen, Bernardo Silva n'etiti ndị ọzọ.
Ọnye na-bụ Hakim Ziyech's Girlfriend?
Kemgbe Hakim Ziyech ghọrọ onye a ma ama, a na-eme mbọ iji chọpụta ma nwa agbọghọ ọ bụla ọ bụla so rụọ ọrụ n'ụdị ọkwa ya na-abawanye uru na mkpa ọ dị na ịgba bọl ọkachamara. Ọchịchọ a ebutebeghị nsonaazụ bara uru dịka ọnwa Mee 2020 n'ihi eziokwu nke Ziyech debere ndụ onwe ya na nzuzo.
Ọ bụ ezie na echiche dị iche na-ekwe omume na Ziyech nwere ike iso alụ ọgụ wag ma ọ bụ enyi nwanyị na nzuzo, otu ihe ka na-adịgide; ya na nwanyị ọ bụla na-aga n'okporo ụzọ, ma enweghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n'alụghị di.
Hakim Ziyech nwere ike ịbụ di na nwunye dika oge ede.
Ezinụlọ na-ewere ọnọdụ dị mkpa na akụkọ ndụ Hakim Ziyech. N'ezie, ọ nweghị ụzọ anyị ga-esi dezie akụkọ ndụ onye na-eme egwuregwu na-enweghị ikwu maka ezinụlọ ya. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndụ ezinụlọ Hakim Ziyech na-amalite site na nne na nna ya.
Banyere nna Hakim Ziyech:
Hakim Ziyech mụrụ nna nna Dutch onye ọ bụ onye nọ nnọọ nso site na ịbụ nwa ikpeazụ. N'ihi ya, mgbe ọ nwụrụ na 2003, obi adịghị Ziyech ala. Ziyech na-ekwu okwu banyere Nna ya nke ọma mgbe ọ bụla ohere dapụtara onwe ya. Nke a bụ ihe na-egosi na akụkụ nke onye ọkpụkpọ na-atụfu nna ya.
Banyere nne Hakim Ziyech:
Mama Ziyech bụ onye mba Morocco. Ọ gbalịsiri ike ịzụlite Ziyech na ụmụnne ya asatọ ka di ya nwụsịrị. Mgbalị ya na nkwado ya na-adị ọhụụ na Ziyech bụ onye anaghị echefu ito ya n'oge ndị pụrụ iche.
Hakim Ziyech na nne ya na-ahụ n'anya.
Banyere ụmụnne Hakim Ziyech:
Hakim nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ Faouzi Ziyech. Ọ bụ otu n'ime ụmụnne ndị rụrụ ọrụ dị mkpa na akụkọ nwata na Ziyech. Ọ bụ Faouzi weghaara onwe ya ịrụ ọrụ nke nnukwu nwanne nwoke site na iji Ziyech gaa ọzụzụ ịgba bọl na itinye ya ilekọta ezinụlọ ndị ọbịa mgbe ọ na-arụ ọrụ na SC Heerenveen. Nwanne nwanne ọzọ nke Hakim bụ nwanne ya nwanyị nke okenye Jam Ya. Naanị anyị maara na 'Jam Ya' bụ ya nick n'ihi na Ziyech emeghị ka ihe ọ bụla ọzọ mara banyere ya.
Zute nwanne nwanyị nke okenye Hakim Ziyech.
Banyere ndị ikwu Hakim Ziyech:
H pụọ na ezinụlọ Hakim Ziyech, amachaghị banyere usoro ọmụmụ ya karịsịa na ọ gbasara ndị nne na nna ya ochie. N'otu aka ahụ, amabeghị ihe banyere nwanne nna ya na nwanne nna ya, mmepe nke metụtara ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya. Agbanyeghị, ọ nwere nwa nwa nwanyị mara mma nke a na-akpọ Anissa.
Zute nwa nwanne nwanyị Hakim Ziyech bụ Anissa.
Ndụ nke Hakim Ziyech:
Kedu ihe na-eme ka ndị ịgba ọsọ bọọ? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke ụdị onye ọ bụ iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, onye Ziyech bụ ngwakọta nke àgwà Pisces Zodiac. Ọ na-enwe mmetụta nke uche, nke mmetụta uche na nke okike. Na mgbakwunye, Ziyech na-akpa ọchị ma na-ekwukwa mgbe ụfọdụ.
O nwere obere ihe na ntụrụndụ ole na ole na-agụnye iwepụta oge iji soro ndị enyi ya na ndị nne na nna nọrọ, na-egwu ọdọ mmiri ma na-ehi ụra oge ọ bụla ọ dị mkpa ịkwụsị onwe ya banyere esemokwu.
Poolgba ọdọ mmiri bụ otu n'ime egwuregwu ya.
Ndụ Hakim Ziyech:
Knowmaara na Ziyech nwere ọnụ ahịa ruru nde $ 7 ma na-anata ụgwọ ụlọ pụtara oke n'ụgwọ ọrụ na ụgwọ maka ịgba bọl nke elu-elu? Ọ na-ebi ndụ okomoko nke na-eme ka ọ dịrị ya mfe soro usoro mmefu ya.
Agbanyeghị na amabeghị ọtụtụ ihe gbasara uru ụlọ Ziyech dị na Dronten, Netherlands, anyị maara na Mercedes Benz na Lamborghini Urus bụ akụkụ nke njem ụgbọ ala na mkpokọta ụgbọ ala ya.
A na-ahụkarị ya ka ọ na-agba Mercedes Benz.
Eziokwu nke Hakim Ziyech:
Iji mechie akụkọ nwata anyị Hakim Ziyech na akụkọ ndụ ya, lee ihe amachaghị banyere ya.
Eziokwu # 1 - Nnọchite anya:
Know maara na Ziyech bụ onye nnọchi anya maka ọrụ Drontense SOEP! (Samen Op Expeditie zutere Poen). Ihe oru ngo a na - enyere aka idozi ndu ndi ntorobia nwere nsogbu site n’enye ha aka.
Ọ bụ onye nnọchianya nke Soep Project.
Ndị nne na nna Hakim Ziyech zụlitere ya n'ụzọ Islam. Ọ bụ onye na-agbasi mbọ ike n'okpukpe ahụ ma na-agbasa ụkpụrụ ya site na ikpe 5 ugboro n'ụbọchị. Ọ na-ejikwa akọ ekwu okwu nwere okpukperechi nke okpukpe n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ.
Eziokwu # 3 - FIFA ọkwa:
Ndị okike n’egwuregwu bọọlụ anyị maara n’egwuregwu bọọlụ nwere ezigbo ogo nke na-ekwu okwu ọma banyere nka ha. Ziyech abụghị onye atụpụrụ na njirisi ziri ezi ya nke isi 86. Agbanyeghị, ndị bọọlụ na-ekwu na Ziyech kwesịrị inweta ihe ndị ọzọ ise iji kwalite ya Kevin De Bruyne onye nwere onu ahia zuru oke gbasara isi iri asaa na iteghete.
Eziokwu nke 4 - Trivia:
Ziyech keputara afọ ọmụmụ ya - 1993 na ọtụtụ ọganihu nke teknụzụ nke malitere ịdị n'otu afọ ahụ. Amụrụ World Wide Web na CERN na 1993 ebe iwebata Pentium microprocessor nke Intel bụ otu afọ ahụ. N'ebe ntụrụndụ, 1993 bụ afọ nke ihe nkiri dịka Schindler's List na Jurassic Park kụrụ cinemas.
Nchịkọta vidio nke Hakim Ziyech Biography Eziokwu:
Hakim Ziyech Biography - Wiki Data
Aha n'uju Hakim Ziyech
Aha Nick Nyere Eze aka
Ụbọchị ọmụmụ Ụbọchị 19th nke March 1993
Ebe amụrụ onye Dronten na Netherlands
Age 17 (ka nke ọnwa Mee 2020)
Nwanne Faouzi Ziyech (nwanne nwoke nke okenye), Jam Ya (nwanne nwanyị nke tọrọ).
omume ntụrụndụ igwu egwu ọdọ mmiri, ihi ụra & soro ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ.
elu 5 ụkwụ, 11 sentimita
Daalụ maka ịgụ ihe ederede ederede anyị na akụkọ ndụ Hakim Ziyech. Na Lifebogger, izi ezi na ịzi ezi bụ okwu nlere anyị. Ka o siri dị, inwere onwe gị ịhapụ ozi na igbe igbe ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na isiokwu a.
Victor Wanyama Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nke ahụ bụ ezigbo ọzụzụ ụlọ, ọ dị m ka ya bụrụ na ndị ọgba bọọlụ ga-ebi ezigbo ndụ dịka nke a,
Ndụ ya na-amasị m
Bọchị agbanweela: Machị 18, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 18, 2021